तुहालोको कारण विमान दु´र्घटना 41 को नि´धन। - NaulooDhun
तुहालोको कारण विमान दु´र्घटना 41 को नि´धन।
June 10, 2021 adminLeaveaComment on तुहालोको कारण विमान दु´र्घटना 41 को नि´धन।
काठमाडौं। रुसको राजधानी मस्कोमा एक विमानमा आ’गला’गी हुँदा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ मस्कोको शेरेमेत्यवो हवाई अड्डाबाट मरमास्क जाँदै गरेको एयरोफ्लोट कम्पनीको सुपरजे-१०० विमानमा आ’गला’गी भएको हो ।विमानमा कुल ७८ यात्रु र चालक दलका ५ सदस्य पनि थिए अस्पतालमा उपचाररत ६ जनामध्ये तीन जनाको अवस्था ग’म्भीर रहेको रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।उडेको केहीबेरमै प्राविधिक स’मस्या देखिएपछि विमानलाई फर्काएर आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो ।
*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
काठमाडौं, २० जेठ । नेकपा एमालेबाट निष्काशित नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता कायम राख्न जारी अनौपचारिक वार्तालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने बताएका छन्। भर्चुअल बैठकको सुरुवात गर्दै नेपालले मिल्ने भए औपचारिक प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने, नभए एकाएक हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले पार्टीमा सहमती खोज्न भन्दै अनन्तकालिन समयसम्म छलफल र वार्ता भनेर अल्झिन नसक्ने बताए।
‘पार्टी मिलाएर लैजानका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। अनौपचारिक कुराकानीलाई छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा हामी छौं,’ नेपालको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भने, ‘मिलाएर लैजाने स्थिति हो भने औपचारिकता दिएर छिटो टुंग्याउन सक्नुपर्छ। अनन्तकालिन समयसम्म छलफल वार्ता भनेर अल्झिन सकिन्न।’
नेता नेपालले अनौपचारिक छलफलमा रहेका साथीहरूलाई कि वार कि पार गर्नुस् भनिसकेको पनि बैठकमा बताएका थिए। उनले अनौपचारिक वार्तामा केही सकारात्मक देखिएको संकेत गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दाउपेचका लागि मात्रै प्रयोग गरेको हुन सक्ने आशंका पनि गरेका थिए। ‘यति कुरा बुझ्नुस् अनौपचारिक कुरा भएका छन्, तर औपचारिकतामा कहिले जाने हो थाहा छैन।
न जाने होइन कि केही थाहा छैन। वार्ता कमिटीका संयोजकलाई नै कारबाही गरेको छ। भीम रावल र अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुरा राख्नुहोला,’ नेपालको भनाइ थियो।
नेपालले बैठकको सुरुवात गरेपछि अनौपचारिक वार्तामा सहभागी भीम रावल घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले वार्तामा भइरहेका कुराकानीबारे बैठकमा जानकारी दिएका थिए। नेता पाण्डेले २०७५ जेठ २ मै टेकेर अगाडि बढौं भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा भए पनि औपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुस् भन्दा अहिलेसम्म नआएको बताएका थिए।
‘हामीले औपचारिकता दिएर अगाडि बढाउ भनिरहेका छौं। अहिलेसम्म औपचारिक केही भएको छैन। अनौपचारिक रूपमा भइरहेका विषय औपचारिकमा आए भने टुंगिने हो, त्यो आउँछ कि आउँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ बैठकमा पाण्डेले भने।
एकैपटकमा १० सन्तान लाई जन्मदिदैँ यी महिलाले राखिन बिश्व रेकर्ड (भिडियाे हेर्नुस्)
जीवन र मृत्युसँग लडिरहेकी नायिका निशाको अ’वस्था नाजुक , सहयोग माग्दै परिवार
भर्खरै आयो लकडाउन बारे यस्तो खबरः यी ठाउहरुमा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो
पिपलकाे रुख काट्ने क्रममा च्या’पि’ए’र एककाे मृ’त्युु Rip😭😭!
नपढ्ने लाइ ठुलो दशा लाग्नेछ अबस्य पढेर नाग देवताको दर्शन गरौ ! June 18, 2021
यी ८ कुरामा ध्यान दिए, बिहेपछी झनै ‘कडा लभ’ पर्छ June 18, 2021
छोराको श’व सुम्सुम्याउँदै आमाले ‘उठ बाबु उठ’ भन्दै थिइन्, बालक साँच्चै जीवित भए June 18, 2021
एकाबिहानै हेर्नुहोस्, सिन्धुपाल्चोकमा राहात वितरणमा डरलाग्दो झ’डप, दुःखमा मलाम लगाउने बहानामा यस्तो. June 18, 2021
सुरबिर पन्डित दारी बा लाई ज्युदै श्रद्धाञ्जली लेख्ने को हो? रिसले आगो हुँदै मिडियामा Surbir pandit June 17, 2021